Ciidamo soogaaray Magaalada Muqdisho oo loogu tala galay ilaalinta. – Kismaayo24 News Agency
Ciidamo soogaaray Magaalada Muqdisho oo loogu tala galay ilaalinta.
by admin 20th January 2020 0110
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa dhawaan soo gaaray Ciidamo ka socda dalka Nigeria, kuwaasi oo kamid noqonaya Booliska Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidamadan soo gaaray Muqdisho ayaa waxaa dalka Nigeria loogu soo Gaba-gabeeyay tababar Cusub oo la xiriira shaqada Ciidanka Booliska AMISOM iyo Arrimo ku aadan xaaladda dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Ciidanka oo tirro ahaan gaaraya ilaa iyo 130 Askari ayaa ka howlgeli doona Magaalada Muqdisho, isla markaana waxaa ay ka shaqeyn doonaan Arrimaha Doorashada la filayo in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo sanadkan 2020/2021.
Ciidanka ka socda dalka Nigeria ayaa qorshahu yahay in Muqdisho ay ka howlgan muddo sanad ah, kuwaasi oo la shaqeyn doona Ciidanka Booliska Soomaaliya, iyagoona iska kaashan doona Arrimaha Doorashada Madaxweynaha iyo mid Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Taliyaha Ciidanka Booliska AMISOM ayaa waxaa uu Ciidamadan Cusub kula dardaarmay inay si toos ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee Magaalada Muqdisho loo keenay, isla markaana ilaaliyan Xeerka u yaalla dalka.
Saddex caruur ah oo ku geeriyooday Kaam ku yaalla duleedka Muqdisho
Dhageyso: Zubeyr Al-Muhaajir oo sir badan kashifay.
Muqdisho:-Xildhibaan Ka tirsan Aqalka sare Oo si kulul uga hadlay dhismaha derbiga kenya
Ahmed sudani 1st January 2018
DegDeg:- Qarax khasaara geystay Oo lala Eegtay Ciidamo Ka tirsan Dawladda.
Ahmed sudani 10th May 2018
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Oo Shegay In Qudus ay sii ahaan doonto Caasimada Falastiin
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Awqaafta & Arr Diinta ee xuukamadda Jamhuuriyadda Federaalka soomaaliyeed Hon Osman Aadan Dhubow ayaa maanta kaqeyb galay...
admin 25th March 2020
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 04 March 2020 ka dhacay Magaalada Muqdisho shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda Awqaafta iyo...
admin 4th March 2020 4th March 2020